Dhambaal ku aaddan 15 Maajo oo loo diray Aasaasayaashii Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed (SYL) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Dhambaal ku aaddan 15 Maajo oo loo diray Aasaasayaashii Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed (SYL)
MUQDISHO,(SONNA)- Waxaad marka hore iga guddoontaan Salaan idiinkaga timid mid kamid ah Jiilasha ku soo koray, wax ku soo bartay islamarkaasna ku soo kifaaxay Gobannimadii aad dhiigiinna u daadiseen, xoolihiina iyo dantiiniina u dayacdeen.
Aasaasayaasha Ururkii SYL ee Sharafta iyo Qiimaha lahaayow.
Salaantan waxaan kala soo socdaalay Raas Casayr iyo Raas Kamboone waxayna daarrantahay duur-xul iyo daltabyo.
Waxaan Allaah idiinkaga baryayayaa in uu Jannadiisa qaaliga ah idin dejiyo!
Haddii aan intaas gogol-xaar iyo maan-xadantayn uga gudbo, waxaan maanta oo ku beegan 15 Maajo oo ah maalinta loo asteeyay in loo dabbaaldego Ururkiini SYL rabaa in aan idiin xogwaramo e, ii oggolaada in aan idiinkaga xogwaramo meesha uu xaalkeenu joogo 78 sano kaddib markii aad aasaasteen Ururka SYL.
Waxaad 78 sano kahor ka digteen, ka dagaasheen kana dhiidhideen heeryadii Gumaysiga ee berigaas na saarnayd waxaadna ku guulaysateen in aad Gumaysigii naga kicisaan, dalkeennuna uu noqdo dal xor ah oo dowlad dimuquraadi ah leh. Hadda waxaan ku jirnaa xaalad ka duwan xaaladii wakhtigaas. Waxaa intaas noo dheer in gumaysigi berigaas aad la dirirteen uu hadda ku guulaystay in dad badan oo Soomaaliyeed ay u durbaan-tumayaa in uu dalka dib ugu soo laabto.
Qabyaaladdii aad berigaas gaashaanka u daruurteen dadkana kala dagaasheen waxay haatan dalka ka jirtaa iyadoo halbeeg u ah qayb kasta oo hab-nololeedka bulshada ku jirta, sida dhaqan-dhaqaalaha, saami-qaybsiga siyaasadda iyo xitaa qaar kamid ah qaar goobaha diinta iyo cibaadada.
Dhaqankii iyo hiddihii aan dadka kale uga dir-soocnayn wuxuu hadda marayaa meel Allow Sahal ah oo aan ka baqayo in labaatan sano dibadeed la waayo cid aqoon iska daaye’ xitaa dhigaal qoran ka haysa. Dhaqanno cusub oo aan dunida ka soo qalin-daarannay ayaan haatan ku faannaa, waxaana marag ma doonto ah in afafka qalaad ka mudan yihiin afkeenna, waayo goobaha ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo xittaa ogeysiisyada ama wacyigelinnada waxaa lagu qoraa luqado qalaad ama Af Soomaali dubbe lala dhacay!
Midnimadi aad berigaas hanateen waxay iyaduna hadda qaadatay macno kale; waxay noqotay mid la galo lagana baxo wakhtigii la doono. Waxaa lagu jaangooyaa rabitaanka hoggaanka markaas hor-booda maamullada dalku u kala qaybsamay oo haatan Lix ah.
Dowladnimadii aad noo dhaliseen waxay haatan la daalaa-dhacaysaa dakharo siyaasadeed oo ay u gaysteen dad qaybaaladda ku awr kacsada oo manfaca qabiilka iyo mansabka dowladda isku xira. Dadkaas annga ayaa doorana annaga ayeeyna na dulleeyaan, waana dad wata dhaqanka ”arkaa qaadka ah” ee Allaah laga magangalo.
Da’yarta Soomaaliyeed oo haddii idinka la idin barbardhigo aqoon iyo anfacaba idinka badan ayaa waxaa ku dhacay cudur ay cududdooda la arki waayeen, cudurkaas oo keenay in ay noqdaan ”ma liibanayaasha lagu liibaanay”.
Waxaan aad iyo aad uga uur-xumahay in aan Aakhiro idiinkugu soo diro dhambaal aadan mudnayna in aad maqashaan ama aragtaan, laakiin waxaan rabaa in aan qalbiga idiinkugu qaboojiyo in ay jiraan ififaalooyin soo ifbaxaya oo muujinaya in hoggaanka dalka ee hadda talada haya ay xoogga saarayaan dib u soo noolaynta awoodda dhallinyarada. Wuxuu fursado shaqo, hoggaamin iyo metelaadba siiyay da’yar badan oo rag iyo dumar isugu jira.
Waxaan rajaynayaa in sannadkan sannadka xiga haddii uu Alle idmo wedkuna ii kaadiyo aan degelkiina idiinkugu soo diro dhambaal kan ka wanaagsan, ka rajo iyo raynrayn badan Insha Allaah!
Duco iyo mahadnaq naga guddooma.
W/Q. Cabdi Muuse Macalin oo ah Qoraa, Suxufi madaxbanaan, Macallin Saxaafadeed, Turjubaan iyo Nabadjire
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Gaalkacyo “SAWIRRO”
Next articleXuska Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May (warbixin)